Lambarrada isku duba ridka oo hayadda cashuuruhu adkeenayso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saldhigga hayadda canshuuraha Magnus Ladulåsgatan ee magaalada Stockholm sawir: CHRISTINE OLSSON / TT
Lambarrada isku duba ridka oo hayadda cashuuruhu adkeenayso
Hey'adda canshuuraha oo xakameyneysa lambarada isku dubbaridka.
La daabacay torsdag 12 oktober 2017 kl 11.03
Hey’adda canshuuraha Sweden ” Skatteverket” ayaa adkeyneysa ama yareyneysa xadgudubyada la xiriira lambarada isku dubaridka ” samordningsnummer” ee la siiyo dadka aan dalkan sharciga daganaashaha ku laheyn.
Dhibaatada arrinkaan ka jirtey ayaa aheyd in shirkado ganacsi iyo dad shakhsiyaad ahi ay lambaradaas si qaldan u isticmaaleen kuna dalbadeen lacago aysan xaq u laheyn iwm.
Lambaradaan la siiyo dadka aan dalkaan sharciga daganaashaha ku laheyn ayaa si sahlan looga heli karaa hey’adda canshuuruha iyadoo aan dabagal weyn lagu sameyn laakiin hey’adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ayaa bilaabey in ay lambaradaas aqbalaan una aqoonsadaan sidii in ay la mid yihiin waraaqaha aqoonsiga dalkan ama teesaraha ayna tusaale ahaan gundhig uga dhigeen nidaamka caymiska bulshada iwm.
Hey’adda canshuuraha ayaa hadda rabta in ay helitaanka lambaradaas aad ugu adkeeyso dadka aqoonsiyada aan dhabta ahayn wata ama aan dalkaan ka helin ogolaansho dhanka shaqada ah.
Pia Blank Thörnroos waa sharci yaqaan hey’adda canshuuraha u qaabilsan dhanka sharciyada:
- Tusaale ahaan haddii qof afkaar ganacsi wataa uu waraaq aqoonsi oo bug ah canshuurta loo yaqaano a-skatt ugu dalbo qof waddan kale oo saddexaad jooga, marka ay taasi dhacdo ayuu go’aankaani kuwaas difaacayaa, ayey tiri Pia Blank Thörnroos.
Sherko oo waraaqaha daganaashaha ku leh dalka Talyaaniga, ayaan horey u ogeyn in si dalkaan Sweden uu uga shaqeeyo uu u baahan yahay in ogolaansho dhanka shaqada ah uu ka helo hey’adda socdaalka ee dalkan. Sherko ayaan sidoo kale ogolaanshahaas hey’adda socdaalka aan la weydiin inuu fasax ka haysto wakaaladda socdaalka markii uu ruqsadda shaqo ka heleyey hey’adda canshuuraha.
Sherko ayaa muddo sagaal bilood ah wuxuu ka shaqeynayey makhaayad biisaha lagu gado oo ku taala Göteborg, wuxuuna si joogta ah u bixinayey canshuuraha lagu leeyahay.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ciidamada booliisku booqdeen goobtii uu ninkaasi ka shaqeynayey , markii la qabtey ka dib ayaa 25 malmood ninkaas xabsi la dhigey ka dibna dalka ayaa laga masaafuriyey.
Tobias Wijk oo ka hawlgala hey’adda socdaalka ayaa sheegey in ay xooga saari doonaan sidii hey’adaha kala duwan ee dalkaani ay xogta arrinkaan ku saabsan isu dhaafsan lahaayeen taasina waxay khasab ka dhigi doontaa ayuu yiri in qofku ogolaansho ama ruqsad shaqo heysto ka hor inta aan la siin lambarada isku dubbaridka ” samordningsnummer”.
Hey’adda socdaalku waxay labaatankii sano ee la soo dhaafey bixisey 750 000 oo ah lambarada isku dubbaridka ” samordningsnummer”.
Lambaradaan ayaa waxaa si qaldan u heley dad aan ruqsad shaqo iyo tan sharciga daganaashaha midna dalkan Sweden ku laheyn, balse hey’adda canshuuraha ayaa hadda rabta in ay arrinkaas aad u adkeyso si aan qaladaadkaas horee dhacey mar danbe u dhicin.